トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Fantaro ny nosy mafana indrindra niditra ny trano izy pachinko
Ao amin'ny pachinko parlors, pachinko milina dia vokatry. Ny fandaharana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny ohatra, eo amin'ny lafiny indostria amin'ny hafa, dia ho tahaka izany koa ianao dia asehoy ny entana. Ao amin'ny pachinko efi-trano, Shima te-haka ny modely ny nosy lehibe sy mafy orina ao amin'ny fandaharana tombony mijoroa ao amin'ny hetsika izay tianao mba hanasongadinana, koa misy zavatra maro mba hanova tanteraka ny fametrahana sy famerenana ny nosy.
arakaraky, raha Hianao no mametraka izay modely ho nosy rehetra, dia fantatsika ny tanjona mason'ny ny modely ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko. Modely, dia ny toerana akaikin'ny
anoloan'ny indrindra seranana, koa ho modely sy Xintai takelaka fivarotana maro, dia matetika no modely izay te-hahazo ny mafy orina fandidiana. Satria marin-toerana ihany koa ny fantsika fanitsiana sy Horukon napetraka, Ahoana no tsara, satria ny mahazatra ny nosy raha misy mandeha, dia heveriko fa ny Atsuishima manokana.
ao amin'ny toeram-pivarotana, Atsuishima indrindra dia tsy famantarana modely in Xintai, quasi-Xintai ary, dia nosy iray izay no misy dia ny modely izay malaza ara-drariny.
izany matetika ihany koa no ampiasaina ao amin'ny hetsika, fa misy ihany koa ny tombony fa tsy azo inoana ho Gase hetsika raha oharina amin'ny tsy ampy taona modely. Raha niresaka ny toy izany raha modely tsara napetraka ho misy nosy, na indray fidirana amin'ny toeram-pivarotana, efa akaiky ny afovoan 'ny toeram-pivarotana. Amin'ny tranga izay ny
nosy amin'ny alalan'ny zavamaniry mitady mafana, azafady miezaka tsara. Back varavarana, mahatonga azy ho mora ny miasa na dia mahazo toerana mendrika tia ny masonao. Ao amin'ny toeram-pivarotana teo afovoan'ny ny, mandra-afovoan-toeram-pivarotana mpanjifa isika dia napetraka ho avy hantsaka intsony.
Raha fintinina, ny modely izay efa napetraka tao amin'io toerana io, dia fa matetika ny modely ho lasa fampisehoana nijanona teo amin'ny fivarotana. Araka izany, eo ho eo, mety ho atao ao amin'ny hetsika ny modely, dia matetika ihany koa fantsika fanitsiana ara-dal?na foana fantsika.
Ary hita any amin'ny nosy, ka dia miasa tsara kokoa amin'ny natiora, ho tonga haingana kokoa convergence ny lehibe hira azo inoana, ihany koa ny zavatra izay mitady hiafara amin'ny mitarika fitokonana. Matetika isika mba ho miafina mirona hanao sonia modely sy Xintai, fa nisy koa ambaratongam-fahamarinan-toerana Any no satria, raha ny marina, heveriko fa ny tanjona mora ny nosy eo amin'ny pachinko trano izy.
avy tamin'ity indray mitoraka ity dia ny hampahafantatra, ho lasa nosy ankapobeny fandaharana, fandaharana ny nosy modely, na handeha araka ny karazana raharaham-barotra, no miovaova be isaky ny pachinko trano izy. Ao amin'ny nosy ny faritra hita maso amin'ny fidirana, misy ihany koa ny efi-trano pachinko tonga mba hametraka ny tanjona maso modely. By
tahan'ny vola, dia misy ihany koa ny pachinko efi-trano, sns izay tsy manao toy izany nosy. Kanefa kosa raha ny amin'ny fanavotana dia avo ny tahan'ny pachinko efi-trano, satria tsy sitrana na dia lehibe kokoa vola tsy tokony ho, manjary sarotra ny mamy noho ny famantarana modely.
na dia amin'ny avo tahan'ny fiovam-po, ao amin'ny famokarana sy ny varotra tsara pachinko parlors, dia mety hisy toy izany nosy. Pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny fiovam-po tahan'ny ny aminareo, eo amin'ny raharaha latsaky ny 3 Yen, tokony misy foana ny sisintsisin'ny dia nandamina ny modely izay mikendry voalohany ny aloka.
I nankany amin'ny toeram-pivarotana, Voalohany indrindra, miezaka mba hahazo antoka ny nosy akaikin'ny afovoan 'ny nosy ny fandraisana ho mpikambana ary ny varavarana any aoriana akaiky sy fivarotana ny takelaka modely. Mahagaga mikendry Mety hisy nosy izay nandamina ny modely. Tokony.
I nankany amin'ny toeram-pivarotana, Voalohany indrindra, miezaka mba hahazo antoka ny nosy akaikin'ny afovoan 'ny nosy ny fandraisana ho mpikambana ary ny varavarana any aoriana akaiky sy fivarotana ny takelaka modely. Mahagaga mikendry Mety hisy nosy izay nandamina ny modely.